Filtrer les éléments par date : samedi, 18 août 2018
samedi, 18 août 2018 20:18
Fianarantsoa: Kandida ho filoha i Randriamampionona Joseph Martin dit Dadafara
Nanambara izany tamin'ny fomba ofisaly teto Fianarantsoa ny tenany nandritra ny fihaonana tamin'ireo mpomba sy mpanaradia azy eto an-toerana sy manerana ny Nosy tonga nisolon-tena ny rehetra.
Ny antoko politika RTM na Refondation Totale de Madagascar no manolotra azy ho kandidà amin'ny fifidianana hotanterahina amin'ny 7 novambra io.
Tontosa teto Fianarantsoa teo amin'ny Espace Royal Bateravola izany ny andron'ity sabotsy 18 aogositra ity.
samedi, 18 août 2018 19:50
Maroatsetra: Savaina hatrany anatin'ny fivaviana ny mpiasa lavanila
Maro ireo Patron lavanila no misava ireo mpiasa rehefa vita ny asa lavanila sao misy mangalatra ireo mpiasa, fa ity orin'asa iray ity kosa dia misava ary mitsapa ny atin'ny fivaviana mihitsy satria raha ny filazany dia misy manafina lavanila ao anaty fimailo na kapoty ka asisiny anaty fivaviana.
Mahatratra an-tapitrisany moa ny kilao amin'ity lavanila ity, ka dia lasa samy manao ny tsy fanao avokoa na ny mpiasa na ny mpampiasa.
Maro ireo mpiasa hiala vokatr'izany fikasihana ny atin'ny fivaviana izany.
samedi, 18 août 2018 19:49
Présidentielle: Au nombre de 17 candidats ce jour
BEZAZA Marie Eliana Pascaline Manasy du Parti Social Démoctrate de Madagascar (PSD), RAVALOMANANA Marc de TIAKO I MADAGASIKARA (TIM) et IMBEH Serge Jovial du parti Antoky ny FIvoaran’ny MAlagasy (AFIMA) ont déposé leurs candidatures ce jour, qui porte à 17 le nombre des candidats qui ont déposé leurs dossiers à la Haute Cour Constitutionnelle Ambohidahy.
La candidature sera clôturée le mardi 21 août 2018 à 17h.
samedi, 18 août 2018 13:10
Nécrologie: Décès de Kofi Annan à l'age de 80 ans
L'ancien Secrétaire Général des Nations-Unies, et ancien prix Nobel de la Paix, vient de décéder suite à une courte maladie selon la famille.
samedi, 18 août 2018 11:10
Italie: Tsy hanatrika ny fandevenana nasionaly karakarain'ny fanjakana ireo fianakaviana maro
Efatra andro lasa izay no nirodana ity tetezana avo be tany Gênes Italie ity, ka namoizana ain'olona 38 hatreto.
Atao anio sabotsy, atrehan'ny Filoha italianina, Sergio Mattarella, ny fiombonam-bavaka lehibe izay tarihan'i Arsevekan'ny Gênes, ho fanomezam-boninahitra farany ireo namoy ny ainy tamin'izany.
Misy 17 amin'ny 38 fianakaviana anefa no nanambara fa ny fanjakana no tompon'antoka voalohany amin'ny tsy fanjarian'izany tetezana avo be izany, ka tsy ny zanak'izy ireo maty no andeha atao fialana vokona hanaovana fisehosehoana, nefa ny tandrametaka amin'ny fanaraha-maso ny fotodrafitrasa goavaan toy itony no anton'ny fianjeren'ny tetezana fa tsy resaka varatra nipoaka izany.
samedi, 18 août 2018 10:49
Zandarimariam-pirenena: Firahalahiana sy fitaizana
Natomboka tamin'ny fomba Ofisialy ny alakamisy 16 aogositra ary hifarana ny sabotsy 18 izao ny fifaninanana hiadiana ny Amboaran'ny Kaomandin'ny CIRGN Analamanga, izay ny vondrontobim-paritry ny Zandary Antsirabe no mandray izany.
Taranja ara-panantanjahantena miisa 3 no hifaninananan'ireo Zandary avy amin'ireo vondrontobim-paritra miisa 4 eto Analamanga dia ny atletisma sy ny volley ary ny baskety izany.
Tanjona hoy ny Jeneraly Rakotondrazaka Andry, Komandin'ny CIRGN dia ny hametrahana ny firahalahiana eo amin'ny samy Zandary, no fitaizam-batana, izay ilain'izy ireo amin'ny asany ihany koa.
samedi, 18 août 2018 10:16
Antsirabe: Mpianatra ho polisy niisa 1 102 naseho ambany faneva
Nahavita fiofanana ara-miaramila nandritra ny 45 andro tao amin'ny Sekolim-pirenen'ny Polisy Antsirabe na ny ENIAP izy ireo. Natao ny zoma 17 aogositra 2018 ny lanonana miaramila nanehoana azy ireo teo ambany faneva, mandrafitra ny andiany "FENITRA".
Hanaraka fiofanana sy hianatra amin'izay izy ireo manomboka izao, taorian'iny sedra ara-miaramila iny. Nambaran'ny Kaomisera Talily Damy, Talen'ny sekoly, fa nisy hatrany ny fanavaozana ny taranja hampianarana azy ireo, mba ho Polisy hanana ny maha izy azy izy ireo, araka ny fanatsarana ny fenitry ny fandriampahalemana, ka nampitomboina ny isan'izy ireo. Na izany aza dia ho hentitra ny fampanarahan-dalàna ireto mpianatra ireto, na dia nitombo aza ny isan'izy ireo.
samedi, 18 août 2018 09:53
Sambava: Misy mikasa hifofo ny ain’i depiote Mamangy Norbert dit Jack?
500 metatra miala ny trano fonenany no indro nahitana kitapo nisy basy vita gasy calibre 12 miisa telo, miaraka amin’ny bala. Olona sendra handeha anaty ala tamin’ny 6ora sy sasany maraina no nahita izany, ary niantso vonjy tamin’ny namany teny amin’ny lalana rehefa nanokatra ny kitapo ka nahita ireto fitaovam-piadiana ireto.
Atsimo Atsinanana: Ravan’ny Polisy ireo andian-jiolahy mitam-piadiana nandravarava
Nody ventiny ny ezaka nataon’ireo Polisy miasa ao amin’ny Brigade Régionale de sécurité Publique Atsimo Atsinanana satria dia tratra avokoa ireo andian-jiolahy mitam-piadiana izay mandravarava amin’ny halatra omby sy vaky trano miaro vono olona.
Tsy latsaky ny folo ny olona efa matin’ireto fikambanan-jiolahy ireto. Tompon’antoka tamin’ny famonoana mpiasan’ny Madagascar National Parks iray tao Manombo telo taona lasa izy ireo.
Mbola isan’ireo mpangalatra taolam-paty ihany koa ary izy ireo ihany koa no nangalatra ny lakolosin-dry mopera ao Maropagnahy Kaominina Manambotra Atsimo Distrikan’i Farafangana.